Musharaxiinta Madaxweynaha Galmudug oo shuruud ku xiray ka qeyb-galka doorashada – Kalfadhi
Musharaxiinta Madaxweynaha Galmudug oo shuruud ku xiray ka qeyb-galka doorashada
Afar musharax oo kamid ah kuwa u taagan doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa war murtiyeed ay soo saareen waxaa ay kaga hadleen hannaanka doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo sida ay suurta gal ku noqon karto inay ka qeyb galaan.
Musharaxiinta oo kala ah C/raxmaan Odawaa, C/llaahi Wehliye, Kamaal Gutaale iyo Cabdi Dheere ayaa shuruud ku xiray ka qeyb galka doorashada, waxaana ay ku baaqeen in la iska kaashado sidii Galmudug uga dhici laheyd hal doorasho, iyadoo loo howlgalayo in la xaliyo khilaafyada iyo is mari waaga wajiyada kala duwan leh.
Musharaxiinta, ayaa baaqa ay so saareen, waxaa ay ku shegeen in guddi doorasho oo cusub la sameyo, kaas oo ay ku mideysanyihiin dhammaan dhinacyada ay quseyso doorashada Galmudug.
Musharaxiinta, ayaa ku baaqay in Ahlu Sunna, ay qeyb ka ahaato hanaanka iyo habsami u socodka howllaha dhiman. Dowladda iyo Ahlusunna ayaa khilaaf kale uu soo dhexgalay, waxaana ay dowladda ku edeyeen in ay faragellin ku hayso doorashada Galmudug.
Waxaa ay sidoo kale dalbadeen in la helo dhinac kale oo 3-aad oo korjoogteysa doorashada Galmudug.
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo wakiiladda Beesha Caalamka oo ka hadlay Doorashada 2020-2021
Aqalka Sare oo akhrinta 1-aad marsiiyay hindise -sharciyeedka Duulista Rayidka